ब्लाइन्ड ट्रस्ट, वर्ल्डवाइड चर्च अफ गॉड स्विट्जरल्याण्ड (WKG)
आज बिहान म आफ्नो ऐनामा अगाडि उभिएँ र प्रश्न सोधेँ: मिररिंग, भित्तामा ऐनामा, सम्पूर्ण देशको सबैभन्दा सुन्दर को हो? त्यसोभए ऐनाले मलाई भन्यो: "कृपया तपाई तल जान सक्नुहुन्छ?"
म तपाईंलाई एउटा प्रश्न सोध्छु: you के तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ जुन तपाईं देख्नुहुन्छ वा तपाईंले आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नुहुन्छ? आज हामी विश्वासलाई नजिकबाट हेर्छौं। म एउटा तथ्य प्रस्ट पार्न चाहन्छु: ईश्वर जीवित हुनुहुन्छ, उहाँ अवस्थित हुनुहुन्छ, विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्! परमेश्वर तपाईंको विश्वासमा निर्भर हुनुहुन्न। जब हामी सबै व्यक्तिलाई विश्वास गर्न बोलाउँछौं यो जीवनमा ल्याउँदैन। उहाँ पनि कम भगवान हुनुहुनेछैन यदि हामी उहाँबारे केही पनि जान्न चाहँदैनौं भने!
विश्वास भनेको के हो?
हामी दुई समय क्षेत्रहरुमा बाँचिरहेका छौं: अर्को शब्दहरुमा, हामी शारीरिक रुपमा सम्भावित संसारमा बाँचिरहेका छौं, एक अल्पकालिक समय क्षेत्र संग तुलना गर्न मिल्ने। त्यहि समयमा, हामी पनि एक अदृश्य संसारमा, अनन्त र स्वर्गीय समय क्षेत्र मा बाँचिरहेका छौं।
"तर विश्वास भनेको तपाईको आशाको कुरामा दृढ विश्वास हो र तपाईले जे देख्नुहुन्न त्यसमा निस्सन्देह" (हिब्रू १०: २))
तपाईले ऐनामा हेर्दा के देख्नुहुन्छ? तपाईंको शरीर बिस्तारै क्रुम्लिling हेर्नुहोस्। के तपाईंले सिink्कमा झुर्री, झुर्री वा कपाल पिरिएको देख्नुभयो? के तपाईं आफूलाई सबै पापी र पापको साथ एक पापी व्यक्तिको रूपमा देख्नुहुन्छ? वा तपाइँ आनन्द, आशा र विश्वासले भरिएको अनुहार देख्नुहुन्छ?
जब येशू तपाईका पापहरूको लागि क्रूसमा मर्नुभयो, उहाँ सबै मानवजातिको पापको लागि मर्नुभयो। येशूको बलिदानले तपाईंलाई तपाईंको दण्डबाट स्वतन्त्र तुल्यायो र तपाईंले येशू ख्रीष्टमा नयाँ जीवन प्राप्त गर्नुभयो। तिनीहरू नयाँ आत्मिक आयाममा पूरा जीवन बिताउन पवित्र आत्माको शक्तिबाट माथि जन्मेका थिए।
"यदि अब तपाई ख्रीष्टसँग बिउँतनुभयो भने, माथिका कुरालाई खोज्नुहोस्, जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, परमेश्वरको दाहिने हाततर्फ बसिरहनुभएको छ। माथिको कुरा खोज्नुहोस्, पृथ्वीमा के छैन। किनकि तपाईं मर्नुभयो, र तपाईंको जीवन परमेश्वरमा ख्रीष्टको साथ लुकेको छ। तर यदि ख्रीष्ट, तपाईको जीवन, प्रकट हुनुभयो भने, तब तिमी पनि उहाँसँग महिमामा प्रकट हुनेछौ। (कलस्सी १: २ 3,1-२4)
हामी उहाँसँग स्वर्गको राज्यमा बाँचिरहेका छौं। पुरानो आत्म मरे र एक नयाँ आत्म जीवनमा आयो। अब हामी ख्रीष्टमा एक नयाँ सृष्टि हौं। "ख्रीष्टमा नयाँ प्राणी" भनेको के हो? तपाईमा ख्रीष्टमा नयाँ जीवन छ। तपाईं र येशू एक हुनुहुन्छ। तपाईं फेरि कहिल्यै पनि ख्रीष्टबाट अलग हुनुहुनेछैन। तपाईंको जीवन ख्रीष्टमा परमेश्वरमा लुकेको छ। ती ख्रीष्टका माध्यमबाट र यसका माध्यमबाट चिनिएका छन् तपाईको जीवन यसमा छ। उहाँ तिम्रो जीवन हुनुहुन्छ। तपाईं यहाँ पृथ्वीमा केवल एक पार्थिव बासिन्दा होइन, तर स्वर्गमा बस्ने पनि हुनुहुन्छ। के तपाईंलाई त्यस्तै लाग्छ?
तिम्रो आँखाले के बुझ्नु पर्छ?
अब जब तपाईं नयाँ प्राणी हुनुभयो, तपाईंलाई ज्ञानको आत्मा चाहिन्छ।
"तसर्थ, प्रभु येशूमा तपाईंको विश्वास र सबै सन्तहरूप्रतिको तपाईंको प्रेम सुनेपछि म तपाईंलाई धन्यवाद दिन छोड्दिनँ र तपाईंका प्रार्थनाहरू सम्झिनँ" (एफिसी २: १-1,15-१-17)
पावलले केको लागि प्रार्थना गरिरहेका थिए? अन्य बस्ने अवस्था, उपचार, काम? No! "हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर, महिमाका पिता, उहाँलाई चिन्नको लागि तपाईंलाई ज्ञान र प्रकाशको आत्मा दिनुहोस्"।
परमेश्वरले तपाईंलाई बुद्धि र प्रकाशको आत्मा किन दिनुहुन्छ? तपाईं आध्यात्मिक रूपमा अन्धा भएकोले, भगवानले तपाईंलाई नयाँ आँखाहरू प्रदान गर्नुहुन्छ ताकि तपाईं परमेश्वरलाई चिन्न सक्नुहुन्छ।
«उहाँले तपाईलाई मुटुको उज्यालो आँखाहरु दिनुहुन्छ ताकि तपाईले उनलाई के भन्नु भएको छ भन्ने कुरा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, सन्तहरुका निम्ति उसको उत्तराधिकार कती सम्पन्न छ» (एफिसी २:१:1,18)।
यी नयाँ आँखाहरूले तपाईंलाई तपाईंको अद्भुत आशा र तपाईंको उत्तराधिकारको महिमा देख्न मद्दत गर्दछ जुन तपाईंलाई बोलाइएको थियो।
"उहाँ हामीमा कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जुन हामी उनलाई उहाँको पराक्रमी शक्तिको प्रभावबाट विश्वास गर्छौं" (एफिसी २:१:1,19)।
तपाईले आफ्नो आत्मिक आँखाले देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाईले येशू ख्रीष्टलाई शक्तिशाली तुल्याउनुहुने माध्यमबाट तपाईंले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ।
"उनको साथ, आफ्नो सामर्थ्यको शक्तिले, उनले ख्रीष्टमा काम गरे जब उनले उहाँलाई मृत्युबाट बिउँताए र स्वर्गमा दाहिने हाततर्फ प्रयोग गरे सबै साम्राज्य, शक्ति, सामर्थ्य, शासन र सबै नाम, जसलाई यसमा मात्र प्रयोग गरिएको छैन। विश्व तर भविष्यमा पनि (एफिसी २: १-1,20-१-21)
येशूलाई सबै साम्राज्य, शक्ति, शक्ति र नियमहरूमाथि सबै सामर्थ्य र महिमा दिइयो। येशूको नाममा तपाईं यस शक्तिमा भाग लिनुहुन्छ।
"र उसले आफ्नो खुट्टामुनि सबै थोक गरे र उसलाई उनको शरीर भन्दा सब भन्दा माथि समुदायको प्रमुख बनायो, अर्थात् पूर्णरूपमा जसले सबैमा पूरा गर्दछ" (एफिसी २: १-1,22-१-23)
यो विश्वासको सार हो। यदि तपाईं ख्रीष्टमा को हुनुहुन्छ भनेर यो नयाँ वास्तविकता देख्न सक्नुहुन्छ भने यसले तपाईंको सम्पूर्ण सोच बदल्छ। तपाईले अहिले के अनुभव र अनुभव गरिरहनु भएको छ यसले तपाईंको वर्तमान जीवन अवस्थालाई नयाँ अर्थ दिन्छ, नयाँ आयाम दिन्छ। येशूले तपाईंको सम्पूर्ण जीवन पूर्णरूपले भर्नुहुन्छ।
मेरो व्यक्तिगत उदाहरण:
त्यहाँ मेरो जीवनमा जीवित अवस्था र व्यक्तिहरू छन् जसले मलाई भावनात्मक रूपमा थाँहा दिन्छ। त्यसपछि म मेरो मनपर्ने ठाउँमा जान्छु, चुपचाप र मेरो आध्यात्मिक बुबा र येशूसँग कुरा गर्छु। म उसलाई खाली कस्तो महसुस गर्छु भनेर म व्याख्या गर्छु र म कत्ति मूल्यांकन गर्छु कि उसले मलाई आफ्नो सम्पूर्ण अस्तित्वले भर्दछ।
Is त्यसैले हामी थाक्दैनौं; तर यदि हाम्रो बाहिरी व्यक्तिले निर्णय गर्छ भने, भित्री दिनदिनै नयाँ हुन्छ। किनभने हाम्रो कष्ट, जुन अस्थायी र प्रकाश हो, यसले अनन्त र जबरजस्त महिमा सिर्जना गर्दछ, जुन हामी देखिनेमा देख्दैनौं, तर अदृश्यमा गर्दछौं। किनभने के देखिने छ अस्थायी छ; तर के अदृश्य छ त्यो अनन्त छ » (१ कोरिन्थी १२: -2-।)
तपाईंको जीवन येशू ख्रीष्ट मार्फत छ। उहाँ तिम्रो जीवन हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईको टाउको हुनुहुन्छ र तपाई उसको आत्मिक शरीरको अ are्ग हुनुहुन्छ। तपाईंको आजको कष्ट र तपाईंको वर्तमान जीवनको मामिलाहरूले सबै सदाको लागि गहन महिमा सिर्जना गर्दछ।
जब तपाईं फेरि ऐनामा अगाडि उभिनुहुन्छ, आफ्नो बाहिरीमा नहेर्नुहोस्, दृश्यमा, तर अदृश्यमा जुन सदा रहन्छ!